IMEX Frankfurt: Filaharana kintana rehetra ao amin'ny Corporate Executive
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » IMEX Frankfurt: Filaharana kintana rehetra ao amin'ny Corporate Executive
Ny Komity Olaimpika Iraisam-pirenena Barclays, Cisco, Microsoft ary KPMG, dia anisan'ireo orinasa lehibe manerantany sy mpisava lalana mizara ny fomba fihevitr'izy ireo amin'ny hetsika ao amin'ny Exclusively Corporate atao ny alatsinainy 20 mey, ny andro talohan'ny IMEX tany Frankfurt.
Exclusively Corporate dia noforonina tamim-pitandremana mba hamaliana mivantana ny valiny avy amin'ireo matihanina amin'ny hetsika natao tamin'ny orinasa izay nizara ny olana sy ny lohahevitra tian'izy ireo ho hita. Vokatr'izany, ny programa dia mahita mpikatroka mavesatra amin'ny indostria manolotra fivoriana izay miditra amin'ny filan'ny tsena ankehitriny.
Bob Bejan, Global Head of Events ao amin'ny Microsoft dia nanolotra fivoriana 'Marketing Experiential… .Inona ny manaraka?', Amin'ny antsipiriany ny fomba fampiasana teknolojia hifandraisana amin'ireo mpanjifa amin'ny sehatra manokana. Ny talen'ny varotra an'ny Cisco Systems, Gerd de Bruycker, dia hizara ny toro-heviny momba ny 'Mampifandray hetsika amin'ny fangaro amin'ny varotra ankapobeny' ary - mifanaraka amin'ny fifantohan'ny IMEX amin'ny Imagination amin'ity taona ity - Nicola Wedge, lehiben'ny hetsika ao amin'ny Barclays Bank, dia hiresaka momba ny 'Innovation sy ny fahaiza-mamorona eo amin'ny tontolon'ny orinasa. '
Fotoana. Teknolojia. Talent
Ny talen'ny fikambanan'ny komity olympika iraisam-pirenena momba ny hetsika sy fandraisana vahiny, Panos Tzivanidis, dia hifantoka amin'ny '3Ts - fotoana, teknolojia ary talenta', ary hibanjina ny ho avy ao amin'ny fotoam-pivoriany 'Fitantanana hetsika manerantany sarotra sy sarotra'.
Ny programa fenoina amin'ny hetsika antsasaky ny andro voatokana sy maimaim-poana ho an'ny fivoriana, drafitra na drafitra fitsangatsanganana ataon'ny orinasa dia atolotra amin'ny alàlan'ny fandalinana tranga, famelabelarana ary fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny tambajotran-tserasera. Avy eo ny mpanatrika dia afaka misafidy iray amin'ireo renirano telo mifanaraka amin'izay ilain'izy ireo - Fianarana Labs mifantoka amin'ny ROI, haitao fampiroboroboana na famolavolana hetsika.
Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX, dia nanazava hoe: "Ny firesahana amin'ny fihaonan'ny orinasa sy ny mpiketrika hetsika manerana izao tontolo izao, dia fantatray fa eo ambany fanerena izy ireo hamorona sy hanome hetsika misy sary an-tsaina sy misy akony - hatrany hatrany. Niara-niasa tamin'izy ireo izahay noho izany mba hikaroka sy hamorona programa misy lohahevitra sy lohahevitra mifandraika amin'izay ilain'izy ireo. Exclusively Corporate dia fotoana tokana ahafahana mianatra sy mitaky tambajotra marina, miaraka amin'ny tanjon'ny fitaovam-piadiana ho an'ny mpitantana ao an-trano miaraka amina fitaovana hanamboarana traikefa vaoavao. "
Ny orinasa manokana ao amin'ny IMEX dia ho an'ny mpitantana orinasa rehetra izay misy ny drafi-pivorian'ny fivoriana sy ny hetsika na ampahany amin'ny asany rehetra. Ny programa manambatra fanabeazana tarihan'ny manam-pahaizana, fifanakalozan-kevitra tsy ara-potoana ary ny tambajotran-tserasera ataon'ny mpiara-miasa dia natao hampisy ny saina ary hanampy ny mpandrafitra hamorona hetsika manohitra, manaitaitra ary mitaona ny tena fanovana.
Taorian'ny Corporate Exclusively, ny mpandamina dia afaka mihaona amin'ireo mpampiranty manerana an'izao tontolo izao ary manao orinasa ao amin'ny IMEX any Frankfurt, atao ny 21 - 23 Mey. Miaraka amin'ny fampirantiana 3,500 150 avy amin'ny firenena XNUMX ao ambanin'ny tafo iray, ity fampisehoana ity dia ahafahan'ny mpanatrika mitsoraka ao afovoan'ny indostrian'ny fihaonana manerantany, ny toeran'ireo fihaonana ary ny mpamatsy ary ny fizahan-toetra ny teknolojia farany.
Ny IMEX any Frankfurt 2019 dia atao ao Messe Frankfurt manomboka amin'ny 21 -23 Mey, miaraka amin'i EduMonday, andro fianarany sy fahitana mialoha ny fampisehoana azy, ny alatsinainy 20 mey. Maimaimpoana ny fisoratana anarana.